Japan - Hawaii, and Hawaii -Japan Travel Bubbles | Breaking Travel News
Ikhaya » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » IJapan-eHawaii, kunye neHawaii -iJapan Bubbles Travel
IJapan-eHawaii, kunye neHawaii -iJapan Bubbles Travel
Oktobha 14, 2020
Kutheni le nto amaJapan ethanda iHawaii kwaye etyelele iHawaii ngaphezulu kwayo nayiphi na enye indawo ekuye kuyo emhlabeni?
Iindwendwe ezivela eJapan zenza inxenye enkulu yeshishini lokuhamba nezokhenketho eHawaii. ISebe lezeMpilo laseHawaii (i-DOH) namhlanje livume iNkqubo yoVavanyo yaseJapan yeNkqubo yoVavanyo lwangaphambi kokuHamba, ibhengeza ngokufanelekileyo i-bubble yokuhamba ezayo phakathi kweHawaii neJapan.
I-DOH ilwamkele uvavanyo lwe-COVID-19 Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) egunyaziswe nguMphathiswa Wezempilo waseJapan, Wezabasebenzi kunye neNtlalontle. Ubungqina besiphumo sovavanyo esingalunganga esivela kumaqabane ovavanyo athembekileyo eJapan aya kuvumela abahambi abasuka kwelo lizwe ukuba bagqithe kwisithuba seentsuku ezili-14 xa befika eHawaii.
I-DOH okwangoku ikwiingxoxo namaziko ohlukeneyo ezonyango eJapan njengoko ikhusela uluhlu lwamaqabane athembekileyo eJapan. Nje ukuba uluhlu lusekwe, inkqubo yaphambi kokuhamba iya kuphehlelelwa iJapan. Ulwazi kunye nohlaziyo ziya kuthunyelwa ku https://hawaiicovid19.com/.
Amazwe aseJapan ahamba phesheya asephantsi kokuvalwa yedwa iintsuku ezili-14 ekubuyeni kwabo elizweni, kodwa amagosa ezoKhenketho eHawaii anethemba lokuba le iyakuba lixabiso elincinci lokuhlawulela iholide yaseHawaii.
Ukuthintelwa kohambo kuhambo lwase-US oluya eJapan kusahleli endaweni. Umbuso waseHawaii umiselwe ukuqala inkqubo yokuvavanywa kwangaphambili kokuhamba kwabahambi bamazwe aseMelika ngomso.